naxaas (ii) xabagta acid sulfuric biyaha naxaas (ii) sulfate
(ka) (xoog leh) (xoog leh) (xanh lam)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CuO (Copper(ii) oxide) ay kaga falceliso H2SO4 (sulfuric acid)?
CuO waxay ku falcelisaa aashitada H2SO4
Dhacdada ka dib CuO (copper(ii) oxide) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid)
H2SO4 waxay la falgashaa salka oksaydhka si loo abuuro milix cusbada iyo biyaha
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4
Cu + Ag2SO4 → 2 Ag + CuSO4
copper sulfate lacag ah lacag naxaas (ii) sulfate
(D) (trung) (trung) (xan)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4
Waa maxay xaaladda falcelinta Cu (naxaasta) ee Ag2SO4 (silver sulfate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Ag (silver) iyo CuSO4 (naxaas (ii) sulfate)?
Dhacdada ka dib Cu (naxaas) waxay la falgashaa Ag2SO4 (silver sulfate)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Ag2SO4 (qalin sulfate), la waayay
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ag (silver sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ag (silver) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CuSO4 (silver sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuSO4 (ii) sulfate ahaan badeecad ahaan?